संसद भवन मर्मतका लागि चिनियाँ टोली आयो, संसद बैठक कहाँ राख्ने? – Etajakhabar
संसद भवन मर्मतका लागि चिनियाँ टोली आयो, संसद बैठक कहाँ राख्ने?
बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकको भौतिक र प्राविधिक तयारी धमाधम भइरहेका बेला उक्त केन्द्र मर्मत गर्नुपर्ने बेला भएको भन्दै छिमेकी चीनबाट प्राविधिक टोली आएको छ ।
चिनियाँ प्राविधिक टोली आएपछि संसद् सचिवालय र सहरी विकास मन्त्रालय अलमलमा परेका छन् । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २४, २०७४ समय: ८:४०:००